आगो डिटेक्टर म्यानुअल सपा 535 "Guarantor"
Homeliness, घर सुरक्षा
यो जीवन बचाउन र सम्पत्ति संरक्षण गर्न डिजाइन गरिएको छ किनभने आगो सुरक्षा, विशेष ध्यान आवश्यक छ। तसर्थ, मानवता आगो अलार्म को तरिका आविष्कार गर्न सबै समय छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आगोको जोखिम विशेष गरी उच्च छ ती ठाउँमा छ।
आगो लड र आगो अलार्म प्रणाली एक प्रयोग डिटेक्टर आगो म्यानुअल सपा 535 "GARANT"। यो तपाईं स्वयं आगो चेतावनी मा अलार्म बारी गर्न अनुमति दिन्छ।
जहाँ डिटेक्टर प्रयोग गर्न
आईपी उपकरण 535 "Guarantor" आगो को मामला मा एक अलार्म सक्रिय गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसलाई त्यहाँ विस्फोट को एक likelihood छ जहाँ क्षेत्रमा स्थापनाको लागि डिजाइन गरिएको छ।
को डिटेक्टर विस्फोटक ग्रेड0वा तल को कहाँ ठाउँमा प्रयोगको लागि उपयुक्त छ। यस्तो क्षेत्रमा यो एक intrinsically सुरक्षित दोहोर्याउन जडान गर्न सकिन्छ। यी जो आवश्यक अवस्था सिर्जना गर्नुहोस्, जस्तै जस्तै "अनि Yakhont" को रूपमा उपकरणहरू र अरूलाई हुन सक्छ।
विस्फोट सुरक्षित क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा, सपा 535 "Guarantor" छ जो intrinsically सुरक्षित क्षेत्रीय, जडान गर्न सकिन्छ। थप वर्तमान-सीमित तत्व आवश्यक छैन। तर यो डिटेक्टर unipolar छ कि विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले लुपमा एक एकान्तरण भोल्टेज आवश्यक छ जब एक अतिरिक्त डायोड प्रयोग गर्न।
को डिटेक्टर, विभिन्न तापमान मा संचालित गर्न सकिन्छ यो उत्तर, जहाँ कम निरन्तर तापमान मा पनि बाहिर प्रयोग गरिन्छ। अपरेटिङ तापमान सीमा प्लस माइनस पचास-पाँच सत्तरी डिग्री हो। चालीस डिग्री सेल्सियस मा परिवेश हावा को सापेक्षिक आर्द्रता 93% भन्दा उच्च हुनु हुँदैन।
आगो डिटेक्टर सपा 535 "Guarantor" निम्न तत्त्वहरू हुन्छन्:
प्रभाव प्रतिरोधी सामाग्री बनेको छ जो आवास, (Armamid कास्ट)।
ग्लास आवरण। किरा पनि अर्को प्रतिस्थापन आवरण समावेश तपाईं ट्रिपिंग पछि उपकरण बहाल गर्न अनुमति दिन्छ।
नेतृत्व बटन मा माउन्ट।
यो बन्धन पट्टा।
विद्युत सर्किट तत्व संग बोर्ड।
क्षेत्रीय जडान लागि टर्मिनलहरु।
त्यहाँ आवरण मा एक लेखिएको छ: "आगोले, ग्लास तोड्न र बटन थिच्नुहोस्।"
पावर उपकरण कारण नक्कली सम्पर्क र पुल rectifier एक नम्बरमा छ।
बटन लुपमा वर्तमान बढ्छ मा क्लिक गर्दा, यो एक रोकनेवाला शक्ति सीमित। यस मामला मा, सक्रिय एक निर्मित नेतृत्व। सपा 535 "GARANT" कारण खींच ड्राइव तत्व गर्न आगो अलार्म पहुंचाता।
उपकरणको मुख्य विशेषताहरु
को डिटेक्टर सपा 535 "Guarantor" निम्न लाभ छ:
आवास एक उच्च शक्ति छ। यो राम्रो छ उपकरणको आन्तरिक घटक, आधारभूत कार्यात्मक कार्य प्रदर्शन सुरक्षित राख्दछ।
यसलाई विरोधी बर्बर सुरक्षा छ।
यो कम्पन प्रतिरोध को एक उच्च डिग्री possesses। यो उपकरण poryto जो मिश्रित को तह, द्वारा सुनिश्चित छ।
मिश्रित को सेडिङ पनि ताराहरु रेखाचित्र समेट्छ।
नियमित फरक तापमान र उच्च आर्द्रता मा संचालित।
उच्च विश्वसनीयता कारण यांत्रिक कार्य को अभाव गर्न हासिल छ।
को टर्मिनलहरु ऑक्सीकरण छैन।
यसलाई नियन्त्रण र प्राप्त उपकरणहरू को विभिन्न प्रकारका संग लाइन स्थापित गर्न सकिन्छ।
तपाईं केबल विभिन्न प्रकारका जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
जब लुपमा बीस-चार भोल्ट एसी पावर डिटेक्टर मा भोल्टेज कम से कम दस microamperes छ। आगो मोडमा, यो मूल्य लगभग बीस milliamps (19,9-21,1 MA) छ। ढांकता बल 0.75 उच्च भन्दा केभी हुनुपर्छ, र बिजुली इन्सुलेशन प्रतिरोध 20 भन्दा megohms हुनुपर्छ।
यो केवल दुई-तार लाइन जसको भोल्टेज दायरा चार वोल्ट बीस-सात गर्न जडान हुँदा उपकरण काम गर्नेछ। यो बिजुली डिटेक्टर लागि भोल्टेज आवश्यक छ।
- 110 मिमी, गहिराई - 70 मिमी लम्बाइ एक निपल (110 मिलिमिटरमा बिना) संग 160 मिमी चौडाई: उपकरण निम्न आयाम छ। यस मामला मा, यन्त्र सय तीन भन्दा बढी कुनै ग्राम वजन।
को डिटेक्टर सपा 535 "Guarantor" अवरोध बिना सबै समय मा संचालित। स्ट्यान्डबाइ मोडमा, एकाइ साठी हजार घण्टा बाहिर बारी गर्न सक्षम छ। यो अर्थ उपकरण औसत जीवन कि - दस वर्ष को लागि।
Earthing: मुख्य विशेषताहरु र विशेषताहरु
एक प्लग के हो
पुरोहित गोंद: संरचना र आवेदन
के हल्ला छिमेकी: एक घर निर्माण बस्ने को आकर्षण।
सक्रिय जीवनशैलीको लागि सही नाश्ता एक अनिवार्य अवस्था हो।
यो पूल को लागि एक सफाई एजेन्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रूपमा प्रयोग गर्न उचित छ? समीक्षा, राय, सिफारिसहरू
पुरस्कार बहुमूल्य हुँदा मात्र काम गर्न जान्छ? यो सत्य तपाईं हार्ड हुन्छ मात्र ती कुराहरूको मूल्यांकन छ?
IPhone3जी र मृत्यु को सफेद स्क्रिन
बोरिस Romanov: को काँध मा उहाँलाई कुनै पनि भूमिका
दर्शन मा Agnosticism
बोतल "कागजात भूरा": समीक्षा, फोटो
कारणहरू र उपचार: को औंलाहरु मा Burrs
बंगला वोरोनिश वर्णन, संख्या, सुविधा र समीक्षा "Swallow",
सामान्य र असामान्य: चार्ज गर्दा ब्याट्री फोडे